ဖက်ရှင် retro စတိုင်လောကီသားတို့သည်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုတစ်နှစ်အသစ်သောအတွေးအခေါ်များများအတွက်ပြီးသားဖှယျဒီဇိုင်နာများနှင့်အဝတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမဆုံးရှုံးပါဘူး။ အမျိုးသမီးသဘောသဘာဝအလွန်အနုပညာဖြစ်တယ်, တိုင်းကိုယ်စားလှယ်ဒဏ်ငွေတစ်ဝက်တစ်သူရဲကောင်းသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်ဖြစ်လို retro စတိုင်စားဆင်ယင်အပေါ်ကြိုးစားကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဖြစ်ပျက်။ မဟုတ်လူတိုင်း retro မူရင်းပုံများ, စတိုင်များ, silhouette များနှင့်ရုပ်တု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကသူတို့ကို created ပါဝင်သော, 20 ရဲ့ကနေစတင်နှင့် 70-ies နှင့်အတူအဆုံးသတ်ကြီးမားတဲ့အချိန်ကာလကိုဖုံးသောသိတယ်။ ခေတ်သစ်ကာလ၌ဖက်ရှင် retro စတိုင်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်၏ဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အထူးဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတောက်ပသောအရောင်အဆင်းများပါဝင်သည်အရာသည်အလွန်ဣတ္စတိုင်, သန့်စင်ပြီး silhouette နှင့်ရင်ခုန်စရာခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း 20 - ဤမိန်းမတို့သည်ခြေအိတ်ပတ်ပတ်လည်ခြေချောင်း, boas နှင့်ဘိုအာနှင့်အတူဖိနပ် mesh, တိုတောင်းသောဆံပင်ပုံစံတွေ, အနိမ့်ခါးနဲ့အင်္ကျီလက်မပါဘဲရေတိုတွင်ဆင်မြန်း, ဘောင်းဘီဝတ်စုံဝတ်ဆင်ရန်စတင်သောအခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မသင်မနေရ attribute တွေကိုလည်းအချိန်အသေး-ဦးထုပ် Cloche အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးနှင့်ပုလဲ strands ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။
အနှစ် 30 - understeer ကြော့နှင့်ဣတ္တစ်ပြန်လာအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဖက်ရှင်ပုံတခုတခုအပေါ်မှာ elongated အ silhouette နှင့်စားဆင်ယင်ဖြစ်လာသည်။ အဝတ်, ကြာကြာပိုပြီးကြော့မတ်မတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်လည်းကြွယ်ဝတဲ့ drapery ထင်ရှား။ , သူတို့အားအကြိမ်အလှအပ, သားမွေးလျနှင့်ကြော့ဦးထုပ်နှင့်အတူအဝတ်ကိုရှည်လျားလက်အိတ်ဝတ်ဆင်။
အဆိုပါ 40 ခုနှစ်တွင်ဖက်ရှင်အပေါ်ကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အမှန်တကယ်ခဲ့ စစ်တပ်စတိုင် ။ အဆိုပါဖက်ရှင်ကျယ်ပြန့်ပခုံးနှင့်တင်းကျပ်သောစတိုင်များအဖြစ်အဖြူကော်လာနှင့် cuffs နှင့်အတူတိုတောင်းအဝတ်, အကျီရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးထုပ်၏အရပျ၌, အမျိုးသမီးများ scarves ဝတ်ဆင်ရန်စတင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အဝတ်တစ်ဦးလူသားရဲ့ယူနီဖောင်းဆင်တူမှစတင်ခဲ့သည်။
50 နှစ်ဣတ္နှင့်ကြော့ရှင်းအပေါ်စစ်တပ်ကအနည်းဆုံးအစားထိုးကမ္ဘာ့အလှတရား၏အသစ်တစ်ခုကိုလိုက်စားအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာဖက်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည် စတိုင်သစ်ကိုကြည့်ရှု ။ အမြိုးသမီးမြားကိုထပ်အဝတ်, ချစ်စရာဦးထုပ်, တင်းကျပ်စွာ lifami နှင့်လည်ပင်းနှင့်အတူဆင်မြန်း, capri ဘောင်းဘီနှင့်လက်အိတ်ကိုဝတ်ဆင်။
60 ကာလမိုက်မဲပြစ်မှားပုန်ကန်အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ဤအချိန်တွင် pin ကို-Up နှင့် hippies ၏စတိုင်များရှိပါတယ်။ ဖက်ရှင်အတွက်တိုင်းရင်းသား motif နှင့်အတူရေတိုထိပ်, ဘောင်းဘီတို, flirty အဝတ်, တင်းကျပ်စွာ-သငျ့ဆင်မြန်း, မြင့်မားခါးနှင့်အတူဘောင်းဘီ, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်အဝတ်ပါဝင်သည်။
နှစ်ပေါင်း 70 - ကဒီမိုကရေစီဖက်ရှင်၏အစဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ silhouette, ဂျီဩမေတြီပုံစံမျိုးစုံနှင့်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားပိုမိုအဆင်ပြေနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်လာနှင့်လူကြိုက်များစတိုင်များတစ်ဦး hippie နှင့်ဒစ္စကိုဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ ဖက်ရှင်အတွက်အိုးပေါကျကှဲဂျင်းဘောင်းဘီ, mini ကိုအဝတ်, ဆင်မြန်း, ရှပ်အင်္ကျီ, တောက်ပပုံနဲ့ဘာမြူဒါဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူအင်္ကျီပါဝင်သည်။
အသစ်ဖက်ရှင်ရာသီအများအပြားခေတ်သစ် couturier တစ် retro စတိုင်လှပသောပုံရိပ်များဖန်တီးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Mascotte collection များကိုထဲတွင် Gucci နှင့် Valentina Yudashkina retro စတိုင်အနိမ့်ခါးနဲ့ဖိနပ်နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘောင်းဘီ, ဦးထုပ် Cloche နှင့်ညနေပိုင်းဆင်မြန်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ မိုက်ကယ် Kors Pre-ကျဆုံးခြင်းအားဖြင့်ဝတ်စုံကိုလည်းပြီးခဲ့သည့်ရာစုလေထုနှင့်အတူ imbued ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး retro စတိုင်တင်းကျပ်, စီးပွားရေးဝတ်စုံနှင့်အဝတ်မဆိုဗီရိုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအလှဆင်ပါလိမ့်မည်အခွားအင်္ကျီ, blouses ။
Dolce & Gabbana နှင့် Dior ယခုရာသီ pin ကို-Up ၏ seductive စတိုင်မြှင့်တင်ရန်။ ဤရွေ့ကား collection များကိုမြင့်မားခါးနှင့်အတူ Micro-ဘောင်းဘီတိုမြင်နိုင်ပါသည်, တင်းကျပ်စွာဆင်မြန်းခြင်း, retro စတိုင်ထိပ်များနှင့်ရေကူးဝတ်စုံနှင့်အတွင်းခံလှီးဖြတ်။
သငျသညျစမ်းသပ်နှင့်အချို့သောဒါမှမဟုတ်အတိတ်၏ပုံရိပ်အပေါ်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ထိုကွဲပြားခြားနားသောခေတ်ကနေအမှုအရာဖလှယ်ဖို့ရှုပ်ထွေးနှင့်မဖို့မအလွန်အရေးကြီးပါသည်သတိရပါ။ သူတို့ကပြီးပြည့်စုံစေသည်ရသောပုံရိပ်၏အရေးပါသောဆက်လက်ကြောင့်တစ်ဦး retro စတိုင်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ပုံကို Creating သင်တို့သည်လည်း, မိတ်ကပ်, ဆံပင်စတိုင်နှင့်အပြုအမူကိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အညိုရောင်သိုးအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အလင်းအစိမ်းရောင်ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အညိုရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဆောင်းရာသီတွင် ugg ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Hybrid ကိုလက်ဖက်ရည်နှင်းဆီ "Pascal"
နံရံများကိုအဘို့အဘယ်သို့ insulator တွင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း
မွစျကားမဟူရာရေကူးဝတ်စုံ 2017 - လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စုဆောင်းခြင်း
အိမ်မှာစပျစ်သီးထဲကနေ Chacha - စာရွက်
ပြတိုက် "အင်ဒီးစ 1972"
Dahlias နှစ်ပတ်လည် - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု, ကြီးထွားလာလျှို့ဝှက်ချက်များ